I-Ashampoo AntiSpy Pro-Thintela ukuqokelelwa kwedatha-Sikhupha iilayisensi ezi-3
ikhaya/Ukhuphiswano/I-Ashampoo AntiSpy Pro-Thintela ukuqokelelwa kwedatha-Sikhupha iilayisensi ezi-3
Andreas2. Fe bruwari 2021
Inkampani yeAshampoo inenkqubo yayo entsha ahampoo Inkqubo yokulwa neSpySpy khululwe. Sisixhobo sokuqala esinokusetyenziswa ukumisa ukuqokelela idatha kwiGoogle, iOfisi, iBing, abavelisi behardware kunye nabanye abaninzi. Ngokucima i-telemetry kwiindawo ezingaphezu kwe-100, ubumfihlo buphuculwa kakhulu Windows 10, 8 kunye ne-7.
1 Inkqubo yeAshampoo AntiSpy
2 Inkqubo yeAshampoo AntiSpy
3 Inkqubo yeAshampoo AntiSpy
4 Isiphelo: Ashampoo AntiSpy Pro
Inkqubo yeAshampoo AntiSpy
Ukongezwa okunengqiqo kwisoftware elwa nentsholongwane
Ukuthunyelwa kwedatha ebizwa ngokuba yi-telemetry ukudala iiprofayili zomsebenzisi, ukwandisa imisebenzi elula kunye nentengiso yobuntu inokuthintelwa ngokuchofoza kanye. Ke uphinda ufumane ulawulo kunye nobumfihlo kwiPC yakho, kwaye phantsi 10 Windows, iWindows 8 kunye neWindows 7.
Indlela iMicrosoft eqokelela ngayo idatha
Ukuba usebenzisa iWindows kwimimiselo eqhelekileyo, iinkonzo ezahlukeneyo ziqokelela idatha malunga nokusetyenziswa kweenkqubo, iimpazamo ezenzeke kunye nedatha eninzi. Nokuba uyayisebenzisa okanye awusebenzisi, kubandakanywa umsebenzi olula, umzekelo Cortana iqokelela zonke iinkcukacha kwiPC kwaye yazise uMicrosoft ngazo naziphi na iimpazamo. Loo datha iqokelelweyo ingasetyenziswa, umzekelo, ukwenza intengiso yomsebenzisi. Iinkqubo ezinje ngoGoogle kunye ne-Bing zikwalandelela indlela yokuziphatha kwaye zibonelele ngezixa ezikhulu zedatha kwiprofayile yomsebenzisi entsonkothileyo. Abasebenzisi abaninzi bavakalelwa kukuba babekwe esweni kwaye bangathanda ukukuthintela oku kungenzeki. Ngokucofa nje kube kanye, unokuthintela ukuthunyelwa kwedatha engenziwanga ngabom kwaye iiprofayili zabasebenzisi ezingafunwayo zenziwe.
Yeka imisebenzi yokuthimla kunye nezinye iisoftware
I-Ashampoo AntiSpy Pro inokwenza okungaphezulu kokumisa nje ukuqokelela idatha yeWindows. Kuba ezinye iinkqubo ezininzi zitsala ngaphezulu kunokuba ubungathanda. Isisombululo seAntivirus kunye neenkqubo ezifakwe kwangaphambili ezivela kumenzi wekhompyuter nazo zinokuthuliswa. I-AntiSpy ikwabandakanya ukufikelela kwiinkqubo zohlalutyo ezinjengezo zisuka kuGoogle okanye iiapps ezifakwe kwangaphambili ezivela kubavelisi behardware ezingezozabo ngqo kwinkqubo yokusebenza. Izikhangeli kunye namakhadi emizobo aqokelela ukusetyenziswa kwedatha ngaphandle kokungenelela. Kukwabalulekile ukubeka iofisi enolwazi endaweni yayo.
Ukuba uyafuna, unokukhuphela uguqulelo lwetyala lasimahla apha:
Isilingo sasimahla-I-Ashampoo AntiSpy Pro
Ukucofa ukhuseleko kubucala
Ngenkqubo yeAshampoo AntiSpy Pro, bonke abaqokeleli zinkcukacha abanokucinywa ngokucofa kanye. Okanye uboleka isandla kwaye ngokobuqu uvimba zonke iinkonzo ongazifuniyo. Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba uqwalasele ngokuchanekileyo ukuba yeyiphi na imisebenzi oyifunayo oyifunayo okanye engafunekiyo. Oku ke kuthintela ukuthunyelwa kwedatha yobuqu.
Ukuya kuthi ga kwiiPC ezintlanu kwindlu enye
Njengomsebenzisi wabucala, unokuxhobisa ukuya kuthi ga kwiikhompyuter ezili-10 kunye nelayisensi ethengiweyo.
Abasebenzisi bezentengiso kuphela abafuna ilayisensi eyahlukileyo kwiPC nganye.
Yintoni enokuyenza nge-Ashampoo AntiSpy Pro:
Gweba iWindows ngokuchasene nokuqokelela idatha okungathintelwanga ngonqakrazo olunye
Ubuninzi babucala kunye nokukhuselwa kwiingxelo zokusetyenziswa ezingafunekiyo
Cwaka ngaphezulu kweenkqubo ezili-100 kunye neenkonzo
✔ Cima Windows 10 i-telemetry kangangoko kunokwenzeka
Thintela ukuqokelelwa kwedatha kuGoogle, iOfisi, iBing, abavelisi behardware kunye nezinye ezininzi
✔ Qalisa ngokuzenzekelayo ngeWindows ukukhusela idatha rhoqo
✔ Lungisa utshintsho ngokukhawuleza
✔ Ukungahambelani ngokuchasene neeprofayile zomsebenzisi ezingafunekiyo
Igama: Ashampoo AntiSpy Pro
Ixabiso: EUR 29.99 €
Khuphela uguqulelo, ubhaliso lonyaka omnye, ukuya kuthi ga kwi-PC ezili-1 kwindlu enye
IsiNgesi IsiNgesi (Ashampoo)
Nayiphi na ikhomputha exhasa iinkqubo zokusebenza ezidweliswe ngasentla. Iinkqubo ezineeprosesa ze-ARM azixhaswanga.
ukuba ukwenziwa kusebenze Unxibelelwano lwe-Intanethi luyafuneka kwinkqubo.
Amalungelo olawulo ayadingeka kwisistim ukuze akwazi ukusebenzisa le nkqubo.
Ilayisensi yenkqubo ihlolwe rhoqo.
Isiphelo: Ashampoo AntiSpy Pro
Kunye neAshampoo Inkqubo yokulwa neSpySpy umsebenzisi unesixhobo esigqibeleleyo sokunciphisa ngokubonakalayo ukuqokelelwa kwedatha Windows 10 kunye nezinye iinkqubo, ngocofa nje okumbalwa ngaphandle kokungena izilungiselelo kufuneka ukhangele kwiiWindows.
I-Ashampoo® PDF Pro 2 -Sipha iilayisensi ezi-5
Isinxibelelanisi seNet-Sikhupha iilayisensi ezili-15
I-Ashampoo Backup Pro 15 -Ulondolozo lokhuselo olufanelekileyo -Sipha iilayisensi ezi-4
iFun Screen Recorder -Ukurekhoda kwesikrini kwenziwe lula -Sipha iilayisensi ezi-4
I-WonderFox Photo Watermark 8.3-sikhupha iilayisensi ezi-3
IObit Uninstaller 9 Pro -Sipha iilayisensi ezi-3
I-WonderFox DVD Ripper Pro -Sipha iilayisensi ezi-5
I-Snagit 2021-Inkqubo yesikrini, imifanekiso kunye nevidiyo-Sikhupha iilayisensi ezi-3
Imiyalezo ye-134 Ukuthandwa kwe-5
Kuqhotyoshelwe Feb 02, 2021
I-Ashampoo ikhuphe inkqubo yayo entsha ye-Ashampoo AntiSpy Pro. Isixhobo esikwinqanaba lokuqala esinokusetyenziselwa ukumisa ukuqokelelwa kwedatha kuGoogle, iOfisi, iBing, abavelisi behardware kunye nabanye abaninzi. Ngokucima i-telemetry kwiindawo ezingaphezu kwe-100, imfihlo iphuculwe kakhulu Windows 10, 8 kunye no-7. Ashampoo ...